Caafimaadka Warka • Warka Warshadaha Martigelinta • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • dib u dhiska safarka • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka
La isku dayay lana tijaabiyey: Saamaynta saamaynta safarka Romania ee Seychelles intii lagu jiray aafada
Seychelles intii lagu jiray aafada
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » La isku dayay lana tijaabiyey: Saamaynta saamaynta safarka Romania ee Seychelles intii lagu jiray aafada
Saameeyaha safarka iyo Dalxiiska Suuqa Razvan Pascu kaliya kama fogaan karo Seychelles. Wuxuu noo sheegayaa sida fasaxiisa jasiiradaha jannada ee Badweynta Hindiya ku soo maray bishii May ee la soo dhaafay.
Ku safridda Seychelles markii seddexaad, Razvan Pascu runtii waa jaceyl iyo danjire jasiiradaha Badweynta Hindiya.
Wuxuu ogaaday meesha uu ku sii jeeday safarkiisa bisha malab ku dhowaad toddobo sano ka hor laakiin wuxuu dareemay in lagu qasbay inuu ku laabto janadii wacnayd bishii Febraayo 2020, ka hor inta aan la helin faafa.
Mar labaad sannadkan ayay ku soo noqotay si ay inbadan ula kulanto!
Razvan wuxuu dib u xusuustaa bisha malabyarooyinka toddobo sano kahor Seychelles, isagoo dib u xasuusinaya xusuusihii quruxda badnaa ee lala wadaagay caruusadiisa quruxda badan ee Andra iyo sida jannadii jasiiraddu u ahayd doorashada ugu habboon ee waayo-aragnimo aan caadi ahayn, oo macno leh. Waxay cagta saareen waddo cusub safarkooda iyagoo isla wadaagaya iyaga oo ogaanaya wadiiqooyin kasta oo tamashle ah, qoraxdana uga dhaca xeebta ugu fiican iyo sahaminta goobaha taariikhiga ah ee quruxda badan ee ku xeeran jasiiradaha. Waxay sameeyeen wixii lammaanaha da 'yarta ah ay sameeyaan; U fur qalbiyadooda khibradaha cusub waxayna jeclaadeen weligood jasiiradaha Praslin iyo La Digue.
Bishii Febraayo 2020, Pascus wuxuu ku soo laabtay Seychelles, markan waxay ahaayeen afar - oo ay la socdaan carruurtooda oo lix iyo saddex jirsatay. Tani waxay ahayd fursad lagu arko meesha loo socdo iyada oo loo marayo aragti cusub, ayuu yiri Razvan. Lammaane ahaan da 'yar, waxay dareemayaan in Seychelles ay noqon karto kulanka ugu dambeeya ee jacayl ee aan luminaynin wax soo jiidasho leh markii loogu riyaaqo meel qoys.
Pascus waxay yiraahdaan carruurtooda ayaa la jaanqaaday halka loo socdo iyo waxa ay bixiso, qoyskoodana waxay abuureen nolol xusuus ah oo ay weligood jeclaan doonaan.
Toortoyada, xeebaha, cuntada, cagaarka meelkasta, nabada iyo jawiga la qaboojiyey oo ay la socdaan qorrax dhaca quruxda badan ayaa ka dhigay fasaxii qoyskeena mid hagaagsan. Waxay ahayd ka hor intaysan xaalada COVID-19 cirka isku shareerin adduunka oo dhan iyo bilooyin badan, iyadoo aan la kulmeyno quful iyo warar cabsi leh oo laga soo sheegayo adduunka oo dhan, waxaan nafteenna ku quudinay xusuus iyo sawirro Seychelles ah, ”ayuu yidhi Razvan.
Seychelles waa “meesha” ay ahaato
Markii uu soo maray meeshii loo socday ka hor safka faafa, Razvan wuxuu ogaa in astaamaheeda gooni u goosadka ah, Seychelles ay ka dhigi doonto baxsadka ugu fiican ee dadka iyagoo raadinaya meel ay aad ugu baahan yihiin inta lagu jiro xilliyadaas cabsida leh.
Laba shaxood iyo 300 Romaniyan ah kadib, Razvan wuxuu fuliyay riyadiisii ​​ahayd inuu la wadaago jaaliyadaha Badweynta Hindiya. Wuxuu door muhiim ah ka qaatay aasaaskii jadwaladii ugu dambeeyay ee Seychelles, isagoo awoodi waayay inuu ka fogaado meeshii uu ku taamayay, wuxuu sidoo kale ku jiray duulimaadkii ugu horreeyay ee ka yimaada Bucharest isaga iyo qoyskiisa fasaxii saddexaad ee jasiiraddan aan la iloobi karin.
“Mid ka mid ah waxa ka soo baxay cudurkan faafa ayaa ah in meelaha lagu riyoodo sida Seychelles ay aad ugu dhow yihiin quluubta iyo maskaxda dadka,” ayuu yidhi khabiirka socdaalka.
… Iyo Kadib
Razvan wuxuu xusayaa in bilihii la soo dhaafay, uu u safray Mexico, Maldives iyo Jordan. Wuxuu qaatay tallaalkiisa wuxuuna si daacadnimo leh u ixtiraamayaa qawaaniinta iyo borotokoollada caafimaad ee waddan kastaa u adeegsado dalxiisayaasha.
Isaga oo dib u eegis ku sameynaya tallaabooyinka ka socda Seychelles, wuxuu sheegay in sharciyadu ay ku sii jiraan xudduudaha laga dhaqan geliyo dalal kale isla markaana kuwani aysan kharibin baashaalkii isaga ama qoyskiisa intii ay ku nasanayeen jasiiradaha.
Tallaabooyinka nadaafadda oo la xoojiyay
Waa wax lagu kalsoonaan karo in la arko borotokoollada u yaal badbaadada martida meelaha kala duwan ee soojiidashada, ayuu qirtay Razvan. Helitaanka fudud ee jeermiska lagu diro meel kasta iyo heerkulka oo la hubiyo marka la galayo dhisme kasta wuxuu siinayaa dadka soo booqda dareenka raaxada iyo xasiloonida maskaxda, gaar ahaan marka mid ay la socdaan carruurta.
Xirashada wajiga wajiga
Xirashada waji-gashiga marwalba meelaha dadweynaha haddii aan la cabbin ama wax cunayn waa mid aad loo fahmi karo maaddaama ay ku lug leedahay nabadgelyada qof walba, ayuu yidhi Razvan.
Inta ka hartay fasaxooda, Razvan iyo qoyskiisa waxay ku sii nagaadeen kooxdooda yar, iyagoo ku raaxeysanaya waxqabadyadooda dabeecadda cajiibka ah ee Seychelles ama isku dayaya khibrado cusub oo ay la leeyihiin bixiyeyaal dalxiis u leh dalxiis. Si kastaba ha noqotee, Seychelles waxaa lagu yaqaanaa goobo muuqaal-qurxoon leh iyo qurux dabiici ah oo qurux badan waxayna hoy u tahay qaar ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka ee dhirta iyo xayawaanka. Waxba yaan lagaa maqnaan!
“Dabcan, talaabooyinka lagu ilaalinayo qof walba, nafteena iyo waliba martida aan martida u nahay, waa amaan waana lama huraan qof walbana anshax ayaa looga baahan yahay Sida socdaal joogta ah, waan ogahay in talaabooyin ay ka jiraan wadan kasta oo macnaheedu yahay in lagu sii furnaado dalxiiska. Haddii aynaan hirgelin iyaga, waxaan noqon doonaa kuwa khasaaraya. Bal fiiri intee in leeg ayaan joognay guriga anaga oo aan safri karin ama aan arki karin dadka, ayuu yidhi.
Qoyska jecel waxay jecel yihiin, qoysku waxay yiraahdaan Seychelles had iyo jeer waxay ku sii jiri doontaa liistadooda baaldiga maadaama meesha loo socdo ay leedahay nooc daaweyn ah oo maskaxdooda ah, gaar ahaan wixii ka dambeeyay sanadkii la soo dhaafay halkaasoo dadka lagu qasbay inay ku sii jiraan qufulada dheer.
Razvan wuxuu leeyahay waan ku soo laaban karaa marar badan hadana wali waan heli karaa meelo cusub oo jacayl ku dhici karo, baro cusub oo la baadho, iyo waxyaabo cusub oo la sameeyo…. Sida janada oo kale.